Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Neil Gaiman dia manome tampon-tampon-tsoloky ny fampifanarahana ho avy an'i Netflix an'ny 'The Sandman'
Mbola tsy mino ihany aho The Sandman, iray amin'ireo asa lehibe indrindra amin'izao androntsika izao, lasa Netflix andiany. Ao amin'ny vaovao ao ambadiky ny seho, Neil Gaiman, mpamorona sary dia mamakivaky ireo seta mahatalanjona ary mijery ihany koa ny sasany amin'ireo props mahafinaritra. Mahavariana ny mahita an'i Gaiman tsy miteny intsony eo amin'ny sehatry ny tontolon'ity ekipa mpamorona famokarana ity. Ny fijerena fohy an'i Tom Sturdige dia milay ihany koa. Ireo taolam-bolo Morpheus sy volo mainty goaika dia tsara tarehy.
Ny synopsis ho an'ny Ny Sandman mandeha toy izao:
Fangaroana angano maoderina sy nofinofy maizina izay ifamatoran'ny tantara foronina sy tantara ary tantara ankehitriny, The Sandman Manaraka ny olona sy ny toerana voakasik'i Morpheus, ilay Mpanjaka nofinofy, rehefa manamboatra ny hadisoana cosmika sy ny olombelona - nataony nandritra ny fahavelomany.
Ity dia tetik'asa goavana amin'ny iray amin'ireo zava-bitan'i Gaiman lehibe indrindra. Mahafinaritra ny mahita ireo mpankafy ilay fitaovana miasa amin'ilay tetikasa. Ny Crystal Kristiana andiany izay tonga tao amin'ny Netflix dia nahafinaritra satria tian'ny ekipa mpamokatra ilay fitaovana. Heveriko fa The Sandman dia hanaraka amin'ny ekipa miaraka amina ekipa iray izay tena tia an'io fitaovana io.
Tsy afaka miandry hijerena an'i Gaiman izahay Ny Sandman rehefa navoaka ihany tamin'ny farany. Hisy fiandrasana henjana. Ahoana ny hevitrareo lahy? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Rob Zombie dia handray ny adaptation The Munsters ho tetikasany manaraka. Vakio bebe kokoa eto.
MoprheusNeill BlomkampNetflixNy Sandman